Whatsapp-kaaga oo la ogaadey in mudaba uu jabsanaa hadaba sidee wax u dhaceen - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Whatsapp-kaaga oo la ogaadey in mudaba uu jabsanaa hadaba sidee wax u dhaceen
Waxa shirkada Whataspp ayaa ogaatey in aalad ama fure cudura oo ay samayso shirkad Yuhuuda lagu jabsadey shaqsiyaad badan oo isticmaala whataspp inkastoo an la ogeyn cadadka dadka la jabsaday telfoonadooda. Shirkada ayaa furahaas ka iibisa sirdoonka dawladaha caalamka.
Cudurka lagu soo furey WhatsApp ayaa u ogolaanaya inuu furo kaamarada telfoonada kadibna dhegeysto waxa lagu hadlayo, waxa kale oo uu akhrin karaa fariimaha kuugu jira telfoonkaaga xataa muuqaalada una gudbin karaa cadowgaaga.
Shirkada Yuhuuda ayaa sheegtay in iyadu furaheeda ka iibsato sirdoonada caalamka kaliya ee ayna ka iibin shaqsiyaad sida Yurub iyo Ameerika.
Hadaba sidee cudurkaan ku galayaa whataspp- oo ku faana in fariimahaagu cidkale oo dhexe akhrin Karin aan ka ahayn qofka aad u dirtey.
”Waxay aaladani kuu soo direysaa telfoono whatsap- ah oo ka imanaya wadamo kala duwan, muhiim maaha in telfoonkaas aad ka jawaabto iyo in kale, waxa kadib dhacaya in telfoonkaagii ay la wareegtey fure uu soo direy cudurku, waxa kaliya kadibna dhacaya in telfoonadii lagu soo direy ay ka masaxmaan taariikhda dirida iyo soo dirida telfoonada ayuu yiri khabiir ka hadley sida cuidurkani u shaqeeyo.
”Waxa furaha cudurkan lagu isticmaaley saxafigii Jamaal Khasuuqi, waa sidoo kale sirdoonka Maraykanku ku isticmaaleen dhaxalsugaha Sucuudiga kuna fashiliyeen dilkii Jamaal Khasuuqi.
Dadka kale ee ilaa hadda la jabsaday whatsap-kooda waxa ka mida nin isagu dacweeyay shirkada Yuhuuda ah ee samaysay cudurkan ee ka iibisa sirdoonka aduunka kale iyo xubno kala duwan oo iyagu u dooda xoriyada.
”Waxa hubaala in tiknooji kastaa wadato daldaloolaheeda kamana maqna Whatsap oo dad badan ku aamineen inuu sheegto in fariimahaagu iyo muuqaaladaadu iyo sawiradoodu ay yihiin aamin. ”Ha aaminin tiknoolaji kasta hadayna ahayn mid dalkaagu sameeyay ayuu yiri Xaamud Cali dabcan Somaliya Kuma jirto dadka u dhow inay heerkaas gaarto.
WhatsApp ayaa iyagu sheegay inay arintan ogaadeen bishan horaanteedii, waxana kuu muuqata in furahaan jirey in muddo ahba markii haddii laguu sioo direy telfoono aanad garanayn ay ka yimaadeen cudurkaas.
Dhinaca kale whatsapp ayaa raacisay in dadku cusboonaysiin (update) ku sameeyaan whatsap-kooda si ay uga badbaadaan furahaas.
Warbixintii Rashiid Ceelaanyo